सरकारले आइतबारदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको फाराम अनलाइनबाटै भर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दैछ । अनलाइन फाराम यातायात व्यवस्था विभागको बेवसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट डिओटिएम डट जिओभी डट एनपी -www.dotm.gov.np_ मा गएर फाराम भर्न सकिन्छ । अनलाइनमा
ब्राजिलका जीव बैज्ञानिकहरुले अति भीमकाय डाइनासोरको कङ्काल फेला पारेका छन् । भेटिएको कङ्कालको बनोट अनुसार उक्त डाइनासोर जीवित छँदा कम्तीमा पच्चिस मिटर २५ लामो हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि आफ्नो देशमा कहिल्यै नदेखिएको
पौष्टिक दृष्टिकोणले माछा–मासु पोषिलो खाना हो । तर, आवश्यकभन्दा बढी खाएमा यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले पनि कस्तो प्रकारको मासु कति खांदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा विचार पु¥याउनुपर्छ । झन् उच्च कोलेस्टेरोल,
भान्सामा दिनहुँ आवश्यक पर्ने र भोजनलाई स्वादिष्ट बनाउने बिभिन्न मसलाहरु स्वास्थ्यका लागि अति उपयोगी रहेको धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।तर भान्सामा प्रयोग हुने मसलाहरुको समुचित प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा तत्कालै सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ ।मेथी भान्सामा
नयाँ र सुन्दर भवनमा बस्ने सबैको चाहना हुन्छ ।वैज्ञानिक अधारमा समेत उपयुक्त देखिएको वास्तु विज्ञान अनुसार बनाइएको भवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, स्वस्थ्य रहने मानिसहरुको विश्वास छ ।वास्तु नमिलेको भवनहरुमा अनेक प्रकाकार दोष, कलह, रोग, अभाव जस्ता
फोहोरको उचित व्यस्थापन गर्र्नका लागि बायोग्यास निकाल्ने तयारीस्वरुप अहिले भारतबाट मेसिन ल्याउने काम भइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिअन्तर्गत वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रबिनमान श्रेष्ठका अनुसार बायोग्यास उत्पादनका लागि सबै मेसिन भारत
बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण बदली र वर्षा भैरहेको छ । उक्त वायुको प्रभावले आज देशभर बदली हुनाका साथै पूर्वी, मध्य र पश्चिम भेगमा वर्षात् भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । दुवै वायुको
नेपाल प्रहरीले आजदेखि सहज तथा सुरक्षित आवागमनका लागि ‘ट्राफिक पोलिस नेपाल’ नामक मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ । ट्राफिक जाम तथा ट्राफिक डाइभर्सन भए÷नभएको थाहा हुने, ट्राफिक गतिविधिसम्बन्धी सूचना तथा दुर्घटनाबारे तत्कालै मोबाइलमा जानकारी
The Ministry of Finance (MoF) today issued instruction for implementation of the 'Mobile Tracking' system to promote legal trade of mobile phones and streamline the effectiveness of related revenue collection. Finance Minister Bishnu Prasa
तपाई स्थानीय निकायका गतिविधि कहाबाट थाहा पाउनुहुन्छ ? की त अफिस धाएर या त कुनै कर्मचारीलाई सोधेर थाहा पाउनु हुन्छ होला । तर अब तपाई आफ्नै मोबाइलबाट यस्ता गतिविधि घरमै बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ । सूचना प्रविधिको विकाससगै स्थानीय निकायले पनि आफ्न
माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटरले शुक्रबार सन् २०१५ को मध्यदेखी अहिलेसम्म करिब १ लाख २५ हजार वटा ट्वीटर एकाउन्ट बन्द गरेको जानकारी दिएको छ । यी सबै ट्वीटर एकाउण्ट आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट(आईएस)सग जोडिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । ट्वीटरका
डाटा ट्रान्सफरमा अर्काे एक नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ । जसले वाइफाइभन्दा सय गुणा बढी तीब्ररुपमा डाटा पठाउन सक्छ । एक भारतीय प्राविधिकले इस्टोनियाको टालिममा ‘लाइफाइ’ नाम दिइएको उक्त प्रविधिको परिक्षण गरेका छन् । लाइफाइबाट इन्टरनेट चलाउदा
नेपाल टेलिकमले ग्राहकको माग बमोजिम इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि डाटा प्याकेजको नयँ योजना ल्याएको छ । टेलिकमले उपलब्ध गराएको सानो परिमाणको डाटा प्याकेजमा ग्राहकबाट अत्यधिक माग भए बमोजिम जिएसएम÷सिडिएमएका प्रिपेड र पोस्टपेड सेवामा आगामी